Ilekwasị Anya n’Ịkwusa Ozi Ọma
NA Wenezdee, abalị iri abụọ na atọ n’ọnwa Septemba afọ 2015, Òtù Na-achị Isi gwara ndị niile na-eje ozi na Betel n’ụwa niile ụfọdụ mgbanwe ndị a ga-eme ka e nwee ike iji ego nzukọ Jehova nwere na-eme ihe ndị kacha mkpa. Na Satọdee, abalị atọ n’ọnwa Ọktoba afọ 2015, Òtù Na-achị Isi kọwara ihe mere ha ji eme mgbanwe ndị ahụ. Ha kwuru, sị: “Ná Ndị Filipaị 1:​10, a gwara anyị ka anyị ‘na-achọpụta ihe ndị ka mkpa.’ N’ihi ihe amaokwu Baịbụl a kwuru, anyị [Òtù Na-achị Isi] chọrọ iji ego nzukọ Jehova nwere na-eme ihe ndị kacha mkpa ga-abara ndị Chineke uru, meekwa ka ikwusa ozi ọma na-aga n’ihu n’ihu.”
Nwanna Stephen Lett, bụ́ onye so n’Òtù Na-achị Isi, kọwakwuru ihe mere e ji eme mgbanwe ndị ahụ mgbe ọ na-ekwu okwu n’Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova. O kwuru, sị: “Òtù Na-achị Isi chọsiri ike ka ikwusa ozi ọma na-aga n’ihu n’ihu. Ọ bụ ya mere anyị ji kpebie ịkwụsịlata ọrụ ụfọdụ a na-arụ na Betel n’ụwa niile ka e nwee ike iji ego anyị nwere na-akwadokwu ikwusa ozi ọma. Dị ka ihe atụ, a ga-akwụsịlata ọrụ ụfọdụ a na-arụ na Betel ma ọ bụ kwụsị ha kpamkpam. Ọ pụtara na a ga-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị na-eje ozi na Betel.”
N’ihi ya, kemgbe ọnwa Septemba afọ 2015, n’ụwa niile, e zighachịla ndị ezinụlọ Betel dị ihe dị ka puku ise na narị ise n’ọgbakọ dị iche iche ka ha gaa kwusawa ozi ọma. Ọ bụ eziokwu na ime mgbanwe ndị a adịghị mfe, anyị ahụla ihe gosiri na Jehova na-agọzi ya. Mgbanwe ndị a emeela ka ikwusa ozi ọma na ịkụziri ndị mmadụ Baịbụl biri ọkụ n’ọtụtụ ebe.
Na Sri Lanka, otu di na nwunye so ná ndị e si na Betel zipụ ka ha gaa kwusawa ozi ọma kwuru na ha lere ya anya ka ohere iji gosi na ha nwere okwukwe na Jehova nakwa na ha tụkwasịrị nzukọ ya obi. Ha kwuru, sị: “Anyị amaghị otú ihe ga-adịrị anyị ma anyị pụọ na Betel. Ma, otu ihe doro anyị anya bụ na Jehova agaghị ahapụ anyị. N’ihi ya, anyị kpere ekpere gwa Jehova, sị, ‘Jehova, biko nyere anyị aka ihazi ihe ọ bụla anyị na-eme ka anyị abụọ nwee ike ịsụ ụzọ oge niile n’agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị.’ N’ọnwa mbụ anyị pụrụ na Betel, o nweghị otú ihe dịịrị anyị. Ma, Jehova gosiri anyị na ọ hụrụ anyị n’anya. Ugbu a, anyị enweela ihe anyị na-eme na-enye anyị ego anyị ji egbo mkpa anyị. Ọrụ zuru anyị ahụ́, ma ọrụ ụlọ, ma ọrụ anyị ji akpa afọ anyị ma ịsụ ụzọ. Ma ihe anyị mụtara na Betel na-enyere anyị aka ihazi oge anyị nke ọma. O nweghị ihe na-eme mmadụ obi ụtọ ka inyere ndị ọzọ aka ka ha mụta eziokwu banyere Jehova. Obi dịkwa anyị ezigbo ụtọ na anyị abụọ na-asụ ụzọ ma na-enyere ndị mmadụ aka ịmụta eziokwu.”
Na Kolombia, ụfọdụ ndị e si na Betel zipụ amụọla asụsụ ọzọ ma kwaga n’ebe ndị dịpụrụ adịpụ ka ha nwee ike ikwusara ndị bi ebe ndị ahụ ozi ọma Alaeze. Ụmụnna ndị a abaarala ọgbakọ ndị ha nọ na ha uru. Otu onye nlekọta sekit kọrọ otú otu di na nwunye e zigara n’otu ọgbakọ sirila baara ọgbakọ ahụ uru. Ọ sịrị: “Obi na-atọ ụmụnna nọ n’ọgbakọ ha ezigbo ụtọ n’ihi otú ha si enyere ha aka. Ụmụnna nọ n’ọgbakọ ahụ na-agazi ozi ọma karịa otú ha si aga na mbụ. A na-akụzikwara ụmụnna nwoke otú e si arụ ọrụ ndị e nwere n’ọgbakọ.” Ọtụtụ ndị a na-ejebu ozi na Betel ewepụtakwala onwe ha na-aga arụ ọrụ na Betel n’ụbọchị ụfọdụ n’izu.
Na Japan, e nwere otu nwanna nwoke jerela ozi na Betel ruo afọ iri atọ na otu. E zigara ya ka o jewe ozi n’otu ọgbakọ e nwere naanị ndị okenye abụọ. Mgbe o ruru ebe ahụ, ọ nụrụ na ndị ọgbakọ ahụ na-achọ ịrụzigharị Ụlọ Nzukọ Alaeze ha. N’ihi ya, o kpebiri na ọ gaghị arụ ọrụ ọ bụla o ji akpa afọ ya ruo izu abụọ ka o nwee ike iso ha rụọ ọrụ. Ma tupu ha ebido ịrụzigharị ya, nnukwu ala ọma jijiji mere na Kumamoto, bụ́ ebe Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ dị. Ebe ọ bụ na o kpebiela ịghara ịrụ ọrụ ruo izu abụọ, ọ haziri ka e kesaara ndị ala ọma jijiji ahụ kpara aka ihe, hụkwa na a gara gbaa ụmụnna ume. Nwanna ahụ kwuru, sị: “M cheta ihe ahụ merenụ, m nwere ike ikwu na ọ bụ Jehova zigara m n’otu n’ime ebe a a kacha nwee mkpa.”
Otu di na nwunye na-ejebu ozi n’alaka ụlọ ọrụ Ọstreleshia aha ha bụ Phil na Sugar kwuru, sị: “Mgbe e zigara anyị ịga kwusawa ozi ọma, anyị kpebiri na anyị ga na-ebi ndụ dị mfe. Anyị rịọrọ Jehova ka o nyere anyị aka ime mkpebi ndị dị mma nakwa ka ọ gọzie mkpebi ọ bụla anyị mere. Anyị kpebiri ịga kwusawa ozi ọma ná mba ọzọ. Jehova agọziela mkpebi ndị anyị mere. O meekwala ka ihe gaziere anyị ka anyị nwee ike iji obi anyị niile na-efe ya.” Di na nwunye a na-eje ozi ugbu a n’ìgwè na-eji asụsụ Bekee amụ ihe n’agwaetiti Samal, dị na Davao, nke dị n’obodo Filipinz. E nwere ndị nkwusa iri atọ na anọ na ndị ọsụ ụzọ itoolu n’ìgwè a. Ugbu a, Nwanna Phil na Sugar nwunye ya nwere adres otu narị mmadụ na iri abụọ chọrọ ka a mụwara ha Baịbụl. Ha kwuru, sị: “A ka nwere ọtụtụ ọrụ na-eme obi ụtọ a ga-arụ. Obi dị anyị ụtọ na anyị tụkwasịrị Jehova obi kpamkpam. O meela ka okwukwe anyị sikwuo ike, anyị ahụkwuokwa ya n’anya.”
Na Rọshịa, e si na Betel zipu otu nwanna nwaanyị na-alụbeghị di ka ọ bụrụ ọsụ ụzọ pụrụ iche. O kwuru, sị: “Ịbụ onye ọsụ ụzọ emeela ka m nwekwuo ohere iso na-arụ ọrụ a kacha mkpa nke a na-enweghị mgbe ọzọ a ga-arụ ya, ya bụ, ikwusa ozi ọma Alaeze Chineke. Obi na-atọ m ezigbo ụtọ na Jehova ji m na-arụ ọrụ a.” Ugbu a, ọ na-amụrụ mmadụ isii Baịbụl. Ụfọdụ n’ime ha si Ịrak, Naịjirịa, Siri Lanka, Siria, na Zambia.
Zambia: Ebe ụmụnna na-anabata ndị e si na Betel zite n’ọgbakọ ha
E nwere ọtụtụ ndị ezinụlọ Betel dị na Zambia e zigara ka ha gaa sụwa ụzọ oge niile. Ha kwuru na obi na-atọ ha ezigbo ụtọ na ha na-ejizi oge buru ibu ekwusa ozi ọma. Dị ka ihe atụ, otu nwanna aha ya bụ Andrew na nwunye ya malitere ịsụ ụzọ oge niile. Nwanna Andrew kwuru, sị: “Obere oge anyị si na Betel pụọ, anyị nyeere mmadụ abụọ aka ha amụta otú e si agụ na otú e si ede. E nwekwara otu nwatakịrị nwoke dị afọ iri anyị na-amụrụ ihe. Ọ ga-eme ihe omume mbụ ya n’Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ n’oge na-adịghị anya. E nwekwara otu di na nwunye anyị ziri ozi ọma n’oge a na-eme Ncheta Ọnwụ Jizọs, kpọọkwa ha ka ha bịa, ha abịa. Ha akwụsịbeghịkwa ịbịa ọmụmụ ihe kemgbe ahụ. Ọmụmụ ihe anyị na ha na-agakwa n’ihu. Anyị ma na ihe a niile agaraghị eme ma a sị na anyị emeghị ihe Jehova si n’aka nzukọ ya gwa anyị, kwe ka o nyere anyị aka, ma chere ka ọ gọzie anyị.”
E nwekwara otu di na nwunye ọzọ bi na Zambia aha ha bụ Edson na Artness. Ọnwa ole na ole ha lụchara, e si na Betel zipụ ha ka ha gaa sụwa ụzọ oge niile. Artness nwunye ya kwuru, sị: “Ihe ndị anyị mụtara na Betel nyeere anyị aka ịma otú anyị ga-esi eji obere ego anyị nwere na-egbo mkpa anyị, ma ghara ịna-eji ụgwọ. Anyị na-enwekwa obi ụtọ. Anyị anaghị akwa mmakwaara maka ozi anyị jere na Betel. Anyị amụtala otú anyị ga-esi na-agbanwe ihe ndị anyị chọrọ ime n’ozi Jehova ma ọ bụrụ na nke anyị bubu n’obi adabaghị. Jehova na-enyekwara anyị aka. Okwukwe anyị nwere na Jehova esikwuola ike. Anyị dịkwa njikere ịnọgide na-erubere ya isi.”